Ny fampiharana yoga dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana yoga tsara indrindra ho an'ny Android
Nahazo laza be dia be ny yoga tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nanjary safidy ho an'ireo izay te hanana endrika ary miaraka miala sasatra. Mihabetsaka ny foibe fanatanjahantena no manolotra an'io safidy io ary nipoitra koa ny ivon-toerany yoga. Na dia azo atao ihany koa ny mampihatra azy any an-trano. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mampiasa ny rindranasa Android izay mety hanampy anao.
Satria ao anatin'ny safidy fampiharana marobe hitantsika ao amin'ny Play Store, misy koa ny application hanaovana yoga. Ka raha mpanaraka an'ity fitsipi-pifehezana ity ianao ary maniry ny ho afaka hampihatra izany ao an-trano ihany koa dia safidy tsara ireo fampiharana ireo.
Ireo rindranasa Android rehetra ireo dia mamela anao hanao fanazaran-tena amin'ity fifehezana ity mora foana any an-trano. Safidy tsara izy ireo raha miditra amin'ny tontolon'ny yoga ianao na raha efa elaela ianao dia te-ho afaka hampihatra izany any an-trano ihany koa.
2 Studio yoga: saina sy vatana
3 Yoga isan'andro - Yoga isan'andro
4 Yoga 5 minitra
5 Fitness isan'andro yoga - drafitra fampihetseham-batana yoga
Manomboka amin'ny iray amin'ireo rindranasa feno indrindra izay afaka hitantsika amin'ity sokajy ity izahay. Safidy mety indrindra ho an'ny karazan'olona rehetra, na manana traikefa izy na tsia. Izy io dia torolàlana tena feno izay anaovana misy toerana mihoatra ny 200 amin'ity taranja ity. Ho fanampin'izay, izy rehetra dia hazavaina amin'ny soratra ary manana sary izay manampy antsika haka sary an-tsaina ny fomba anaovana azy isika. Ny zavatra tsara dia isika mandamina pose amin'ny fahasarotana. Azontsika atao koa ny misafidy ireo izay mifanaraka amin'ny haavontsika amin'ny fotoana rehetra. Safidy tena feno izany.
La misintona an'ity fampiharana ity ho an'ny Android dia mitentina 3,25 euro. Fanampin'izay, misy ny fividianana fampiharana.
Studio yoga: saina sy vatana
Faharoa, hitanay ity rindranasa ity izay tena feno ihany koa. Ho fanampin'ireo lahatsoratra manazava ny toerana tsirairay, dia manana atiny video maro karazana izy ireo. Azonao atao ny mahita ny fomba ahatonga ny fihetsika sasany amin'ny fomba tsotra. Manana karazana fihetsika sy fanazaran-tena samy hafa izy ireo miankina amin'ny zavatra tianao ho tratrarina na ny haavonao. Toy ny fanarahana kilasy yoga avy any an-trano izany. Afaka misafidy kilasy fohy ianao, raha manam-potoana kely, na hatramin'ny 60 minitra.
Yoga Studio: Poses sy kilasy
Yoga isan'andro - Yoga isan'andro
Fahatelo, mahita fampiharana hafa isika izay nahazo naoty tsara. Amin'ity tranga ity dia safidy natao hanaovana fanazaran-tena isan'andro izy io.. Safidy tsara ho an'ireo mpankafy an'ity fifehezana ity izay tsy afaka manatrika fampianarana isan'andro. Misaotra ilay fampiharana azonao atao ny manao fihetsika na fanazaran-tena ao an-trano rehefa manana fotoana malalaka ianao. Misy mihoatra ny 200 ny fihetsika ary ny fanazaran-tena 20. Ho fanampin'izay, nohazavaina miaraka amin'ny lahatsoratra, sary ary misy horonan-tsary maro.
Developer: Ekipa Yoga isan'andro
Yoga 5 minitra
Safidy tsara hafa ho an'ireo izay tsy manam-potoana firy hampiharana an'ity fifehezana ity. Araka ny manolotra fanazaran-tena azontsika atao ao an-trano amin'ny fomba tsotra ao anatin'ny dimy minitra. Misongadina indrindra amin'ny haingam-pandeha sy manazava ny zava-drehetra amin'ny fomba tsotra. Na dia safidy somary heverina kokoa aza io olona efa nanao yoga nandritra ny fotoana kelikely, na dia tsy manam-pahaizana aza izy ireo. Ny sasany amin'ireo lahasa maro omen'ny fampiharana antsika dia kalandrie, fampianarana na fanazaran-tena arakaraka ny andro amin'ny herinandro.
La Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay.
Fitness isan'andro yoga - drafitra fampihetseham-batana yoga
Hofaranantsika ity fampiharana ity izay natao ihany koa ho an'ireo olona te hampihatra ny fanazaran-tena isan'andro. Satria manolotra antsika fahazarana samihafa natao hampiharana isan'andro. Noho izany dia misy karazana fanazaran-tena sy fihetsika maro. Fomba tsara fanaovana yoga na dia kely aza ny fotoana ananantsika. A) Eny, azontsika atao ao an-trano izany.
La maimaim-poana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana yoga tsara indrindra ho an'ny Android
Ny BQ dia nivarotra smartphone 1,1 tapitrisa tamin'ny taon-dasa
Ny lalao heloka bevava sy mistery tsara indrindra ho an'ny Android